Sochii qisaasama bajata mootummaa maqsuuf taasifamaa jiru
Maallaqni misooma gara garaaf sadarkaa ministeeraarraa hanga aanoleetti dhangala’u hojiilee misooma hawaasaafi hojii gara garaa gaggeessituuf kan oolu yoo ta’u, kanaan dura hubannoon hawaasaa gadi aanaa ta’uusaarraa kan ka'e hojiirra oolmaan baajatichaa haala karoorfameen ala qisaasa'aa ture.
Yeroo ammaa aanolee biyyattii kuma 10fi 23 keessatti hojiirra oolmaa baajataa iftoominaafi ittigaafatamummaa akka qabaatu taasisuuf hojii raawwatameen namoonni kuma 51fi 150 akka biyyaatti leenjicha fudhachuu isaanii ragaan gabaasa Ministeera Maallaqaafi Misooma Dinagdee Federaalaarraa arganne ni mul’isa.
Leenjii kennamaa ture kanaan dhaabbilee barnootaa, waajiraalee, buufataalee fayyaa, wiirtuu leenjii qonnaan bulaa gara garaa keessatti baajatni waggaa hojiilee misoomaa gara garaatiif ramadame hawaasa bal’aaf ifa taasifamuu kan eegale yoo ta’u, hanqinaaleen sochicha gufachiisan hedduudha.
Hangi baajataa aanaa tokkoof ramadame gabatee wiirtuulee gara garaa keessatti ibsa baajataaf qophaa'e irratti kan maxxanfamu ta’us raawwiin baajatichaa odiitii ta’ee hawaasaaf maxxanfamuu dhabuunsaa iftoomina akka hinqabaanne kan mul’isu waan ta’eef fooyya'uu kan qaba.
Marii marsaa 7ffaa Finfinnee galma Ministeera Maallaqaafi Walta’iinsa Dinagdeetti qaamota dhimmisaa ilaallatu waliin tibbana gaggeeffame irratti Daariktariin Bulchiinsa To’annoo Baasii Mootummaa mana hojichaa Obbo Damissuu Lammaa akka jedhanitti, baajatni misooma gara garaaf qabamu qabeenya uummataa waan ta’eef of eeggannoon hojiirra ooluu qaba.
Iftoominaafi itti gaafatamummaa hawaasni baajata ramadameefirratti qabu qabatmaan mirkaneessuuf hawaasni abbaa qabeenyichaa ta’ee gaafachuufi dhugaa jiru baruuf mirga qaba kan jedhan Obbo Damissuun, firiin odiitii hawaasaaf ifa ta’uu dhabuunsaa akka hanqinaatti kan ka’udha.
Baajata aanaa tokkoof ramadamee jiru karaa ifaa ta’een hawaasa hubachiisuuf gabatee beeksisaa odiitii hammate aanoolee kuma 10fi 23 keessatti dhaabuuf bara baajataa 2009 karoorfamuu kan himan Obbo Damissuun, wayita ammaa gabateewwan ibsituu baajataa kuma torbaafi sadii ykn dhibbeentaan 98.2 bu’aa odiitii dabalataan akka ibsan taasifameera. Kuni ta’us baajata misooma gara garaaf hawaasa bal’aaf dhangala’e hojiitti osoo hinseeniin dura marii hawaasaa gaggeessuun barbaachisaa ta’uufi hojiin gama kanaan raawwatame ol’aanaadha.
Marii hawaasaa baajata dura taasifamuu qabu gaggeessuuf bara baajataa 2009 aanolee biyyittii 358 ykn dhibbeentaa 35 karrorri qabamee hojiitti seenamuu Daariktarri Kominikeeshinii ministeerichaa obbo Hajii Ibsaa.
Hojiin hubannoo uumuu hawaasaaf kennamaa jiru quubsaa miti kan jedhan Obbo Hajiin, xiyyeeffannoo itti kennuun karaa hawaasa hunda hirmaachisaa ta’een hojjechuuf haal dureen hojii xumurameera. Hanga kuni hintaanetti hawaasni taaksiifi gibira barbaachisaa kaffalaa jiru mirgi abbummaasaa hinmirkanaa'u. Qabeenya uummataa imaanaan fuune qabatamaan misooma hawaasaaf oolchuu dhabuun balaa sirnichaati jedhu.
Namoonni maalndhibdeen qabeenya hawaasaa seeraan ala qisaasessan ija hawaasaa jalaa dhokachuu hindanda'an kan jedhan Obbo Hajiin, namoota baajata qabame seeraan ala qisaasessan hordofuun adabbii seeraa madaalawaa irratti fudhatamaa jiraachuufi hojiin kun fuuldurattis cimee kan itti fufu ta'a.
Hanqinni rakkoo iftoominaa baajatarratti calaqqisaa jiru neetwoorkii sassaabdota kiraa akka babal’atuuf sababa ta’aa jiraachuu himanii, hidhata kana ciruudhaaf sochiin eegalame hawaasa bal’aan deeggaramuu qaba. Hawaasni osoo beela'uu gibiraafi taaksii barbaachisaa kaffalaa jiru qabeenyisaa wayita hattootaan saamamu hincallisu. Dhugaaf hojjechuun kutannoo siyaasaa kan gaafatuufi miira itti gaafatamummaa kan nama keessatti uumudha.
Sochiifi hordoffii hawaasni baajata ramadameeruufiirratti taasisu akka cimuuf deeggarsi sabquunnamtiilee murteessaa akka ta’e kan himan Obbo Hajiin, kanaafuu dadammaqiinsi walirraa hincinne gaggeeffamuutu irra jiraata.
Mariin guyyoota lamaaf gaggeeffame kanarrattis qaamota dhimmisaa ilaallatu sadrkaa naannoorraa hanga aanaaleetti jiran irratti kan hirmaatan yoo ta’u, iftoomina gama kanaan aggaamame dhugoomsuuf kutannoon hojjechuutu irraa eegama.
Walumaagalatti, rakkoo iftoominaa baajata hawaasaa waliin walqabtee ka’u furuuf hojiin hubannoo uumuu mana hojichaan eegalamee jiru cimee itti fufuu kan qabu yoo ta’u, baajata ramadame ibsuun alatti odiitii baajataa xumurarratti abba qabeenya baajatichaa kan ta’e hawaasa bal’aaf ifa taasisuun mirga abbaa qabeenyummaa mirkaneessuudha.
Torban kana/This_Week 43545
Guyyaa mara/All_Days 1468325